ယောက်ျား မိန်းမ ထိုကိစ္စ | .
ယောက်ျား မိန်းမ ထိုကိစ္စ
Posted by ရွှေသတင်းသစ် , at 3:00 AM
ခုတလော ဖတ်မိသော အင်တာနက်သတင်းတို့တွင် မိမိစိတ်ကို ခိုးလိုးခုလုဖြစ်စေခဲ့သော သတင်းတပုဒ် ပါရှိလာ၏ ၊ ထိုသတင်းမှာ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ သန်လျင် GTCကျောင်း၏ စာသင်ခန်း အတွင်း ကျောင်းသားနှင့်ကျောင်းသူ ချစ်ရည်လူး နေကြသည့် ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို မသမာသူများက အင်တာ နက်ပေါ်လွှင့်တင်လိုက်ရာ ဂျာနယ်စာမျက်နှာများထက်ရောက်လာပြီးနောက် ယခုအခါ ဗွီဒီယိုအခွေများ အဖြစ် ရောက်ရှိလာပြီး အင်းလျားမီးပွိုင့်နှင့် ဦးဝိစာရမီးပွိုင့်ကြားတွင် ရောင်းချနေသည် ဆိုသည့်သတင်း ဖြစ်သည် ။
မိမိစိတ်က ပထမဆုံးအကြိမ် ထွက်ရှိသောMelody World တေးစီးရီးတွင်ပါဝင်လျှက် နာမည် ထွက်လာခဲ့သော အဆိုတော်မလေးတစ်ယောက်ကိုလည်း တစ်ဆက်တည်း သွားသတိရလိုက်မိသည် ၊ သူမသည် လည်း GTCကျောင်းသား ကျောင်းသူနည်းတူ အင်တာနက်မင်းသမီးဖြစ်ခဲ့ရသည် ၊
သူမအတွက် ပိုဆိုးတာက သူမသည် ပြည်သူသိ အဆိုတော် တစ်ယောက်ဖြစ်နေခြင်းပင် ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် သူမအနုပညာပါ သေ သွားရသည် ၊ ယခုအခါ ဘယ်ရောက်၍ ဘယ်ပျောက်နေမှန်းပင် မသိရတော့၊ သူမအကြောင်းတွေးမိတိုင်း မိမိရင်ထဲ နင့်နင့်သီးသီး သနားစိတ်ဝင်မိသည်၊ ထို့နောက် နှမျှောစိတ်လည်း ဖြစ်ရသည် ၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသော ယောက်ျားမိန်းမတိုင်း မကင်းနိုင်သည့်ကိစ္စ တစ်ခုကြောင့် ဘ၀နှင့်ရင်းထားရသော အနုပညာလမ်းကြောင်းမှ သွေ ဖီသွားရသည့် အဖြစ်၊ ကိုယ်သာ သူတို့လိုအဖြစ်မျိုး ကြုံလိုက်ရမည်ဆိုလျှင် ဘယ်လောက်များအရှက်ရလိုက်မလဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်လိုများရပ် တည်နေရမလဲ ဟူသော ကိုယ်ချင်းစာနာသောစိတ်နှင့် ခံစားကြည့်မိတိုင်း မိမိအလွန်ရင်နာရသည် ၊
ထို့ပြင် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဘ၀မှ နိုင်ငံသိသရုပ်ဆောင်ဖြစ်လာသော မင်းသမီး တစ်ယောက်၏ ဟိုတယ်ခန်းတစ်ခုအတွင်းက အဖြစ်အပျက် ၊ ထိုအဖြစ်အပျက်သည်လည်း အင်တာနက်ပေါ်ပျံ့နှံ့၍ ညစ်ညမ်းဗွီဒီယိုခွေ တို့ဖြင့် လုပ်စားနေကြသူတို့အတွက် အကြိုက် ဖြစ်ခဲ့ရသည် ၊ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေး မှုထိန်းသိမ်းရေးကို တတွတ်တွတ်ပြောတတ်ကြသော အနှိပ်ခန်းပျော်လူကြီးလူကောင်းတို့၏ လက်ညှိုးထိုးအပြစ်ဆိုစ ရာ ဖြစ်ခဲ့ရသည် ၊
အထက်ပါကိစ္စတို့ကို မိမိ၏ပုဂ္ဂလိကအမြင်ဖြင့် ရိုးရိုးသားသားပြော ရလျှင် ရိုင်းသည်ဟုလည်း မမြင် ၊ ယဉ်ကျေးမှုမျက်လုံးဖြင့်လည်း ဘယ်သောအခါမှ ကြည့်လေ့မရှိ ၊ အရွယ်ရောက် ပြီးသော မိန်းမယောက်ျားတို့၏ ဖိုမသဘာဝ သာဖြစ်၍ အပြစ်ဆိုစရာမဟုတ်ဟု ယူဆသည်၊ ဘာသာရေးအမြင်အရ ယုတ်ညံ့သောအကျင့် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည် ၊ သို့ရာတွင် ဖိုမသဘာဝ လိင်ကိစ္စသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသောမိန်းမယောက်ျားတိုင်း ကင်းနိုင်သော အရာမဟုတ်ပေ၊ ထင်ရှားခြင်း မထင်ရှားခြင်း သာကွာမည်၊ ဘ၀၏ကန့်လန့် ကာနောက်ကွယ် မှာတော့ ဒီကိစ္စသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသော မိန်းမ ယောက်ျား တိုင်းအတွက် ကြီးမားသော အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ် အနေဖြင့် ရှိနေသည် ၊ မုဒိန်းမှုကဲ့သို့သော မတရား အနိုင်ကျင့်မှုမျိုး မဟုတ်လျှင် ကိုယ်နှင့်နှိုင်း၍ စာနာနားလည်နိုင်ရမည်သာ ဖြစ်သည် ၊
အိပ်-စား-ကာမ ၊ ဤသုံးဝသည် လူနှင့် တိရစ္ဆာန်အတူတူဖြစ်သည်ဟု စာပေတို့တွင် ဆိုသည် ၊ ဤအဆိုသည် ယေဘု ယျမှန်ကန်သော အဆိုဖြစ်သည် ၊ အထူးအားဖြင့် ကာမကိစ္စတွင် လူနှင့်တိရစ္ဆာန် များစွာ ခြားနား ခြင်းမရှိပေ၊ ဆိုလိုသည်မှာ မိန်းမယောက်ျား နှစ်ဦးသား တို့သည် သူတို့၏ စိတ်အလိုဆန္ဒပြည့်ဝရေးအတွက် တိရစ္ဆာန်ကဲ့သို့ နှစ်ဦး သဘောတူ ကျင့်ကောင်း ကျင့်မည် ၊မည်သို့ပင်ကျင့်စေ ဤကိစ္စတို့သည် ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမှ ကင်းလွတ်သည်သာ ဖြစ်သည် ၊ ဤအဆိုကို တစ်ချို့လူကြီးလူကောင်းများက ခပ်ရှက် ရှက်နှင့် ငြင်းကောင်းငြင်း မည် ဖြစ်သော်လည်း သဘာဝတရားကို အနည်းငယ်စဉ်းစားထောက် ဆကြည့် လျှင်တော့ ငြင်းဆိုဖို့ အလွန်ခဲယဉ်းပါလိမ့်မည်၊ စာဖတ်သူကို တစ်ခုတော့ အသိပေးပန်ကြားလိုပါ၏ ၊
ယခု မိမိ၏အဆိုတို့သည် အပြင်လောကတွင် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်၍ အင်တာနက်ပေါ်ရောက်နေသော မြန်မာအမျိုး သားအမျိုးသမီးတို့၏ ဖိုမသဘာဝလိင်ကိစ္စတို့ကို အကာအကွယ်ပေးနေခြင်းမဟုတ်၊ ကိုယ့်အဖြစ်ကို မျက်ကွယ်ပြု၍ ယဉ်ကျေးမှုစကားကို တွင်တွင်သုံးလျှက် ပါးစပ်သရမ်းနေ ကြသော လူကြီးလူကောင်းများ စဉ်းစား ဆင်ခြင်ကြစေနိုင်ရန် မိမိ၏ရင်ထဲတွင်ရှိသော စာနာမှု တရားကို ချပြပေးခြင်းမျှသာ ဖြစ်သည် ၊ အဓိကအားဖြင့် ကိုယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်၍ စာနာမှုတရား ထားရှိရေးပင် ဖြစ်သည် ၊ စာဖတ်သူတို့အနေဖြင့် မိမိ၏ ဦးတည်ရာကို ကောင်းစွာနားလည် နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည် ၊
ယခုခေတ်သည် မိမိတို့ ကြားသမျှ မြင်သမျှတို့ကို ဘယ်လိုမှ ငြင်းကွယ် မရအောင် အလွယ်တကူ ရိုက်ကူး ထားနိုင်သော စက်ပစ္စည်းများ ပေါ များသော ခေတ်ဖြစ်သည် ၊ မိမိနှစ်သက်သော ရှုခင်းရှုကွက်နှင့် ပျော် ပွဲရွှင်ပွဲစသည်တို့ကို မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးခြင်းဖြင့် ပြဿနာမရှိနိုင်သော် လည်း မိန်းမယောက်ျားတို့၏ ဖိုမသဘာဝလိင်ဆက်ဆံသည့်ကိစ္စရပ်များ များကို ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်မိလျှင်တော့ ကြီးမားသော ပြဿနာ များ ဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိသည် ၊ အထူးအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ ပိုသတိထားဖို့ လိုအပ်ပါသည် ၊ ဖိုမ သဘာဝ လိင်ကိစ္စတွင် နာမည်ပျက်စရာဖြစ် လာပြီဆိုလျှင် အမျိုးသားထက် အမျိုးသမီးက ပိုနာမည်ပျက် သည် ၊
ထို့ကြောင့် မိမိ၏ချစ်သူရည်းစားနှင့်ဖြစ်စေ လင်ယောက်ျားနှင့် ဖြစ်စေ ဆက်ဆံဖြစ်လျှင် ကင်မရာ ထောင်ပြီး ရိုက်ကူးမထားမိဖို့ သတိကြီးစွာဆင်ခြင်သင့်သည် ၊အမျိုးသားလုပ်သူက “ ပြန်ဖျက်ပါ့ မယ် “ ဟု ပြောတိုင်းလည်း လုံးဝမယုံကြည်သင့်ပေ ၊ အင်တာနက်ပေါ် တွေ့ ရသော မြန်မာညစ်ညမ်းဇာတ်ကား အများစုသည် ပြန်ဖျက်ပါ့ မယ်ဟူသော စကားကို ယုံကြည်မှုမှ ပေါက်ထွက် လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း လေ့ လာတွေ့ ရှိရသည် ၊
ဤနေရာတွင် ယောက်ျားတို့၏ စိတ်သဘာဝကို အနည်းငယ်ပြောချင် ပါသည် ၊ ယောက်ျားအများ စုသည် ကျန်သောကိစ္စများထက် လိင်ကိစ္စတွင် အချင်းချင်းကြွားလိုသော စိတ်သဘာဝရှိကြသည် ၊ ထိုစိတ်သဘာဝနှင့်ပင် သူရိုက်ကူးထားသည့်ပုံ(သို့မဟုတ်) ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတို့ကို သူ့အပေါင်းအ သင်း တစ်ဦးမဟုတ်တစ်ဦးကိုတော့ အလွယ်တကူ ပြမိတတ်ကြသည်၊ တစ်ချို့ဆိုလျှင် ပြရုံတင်မဟုတ်တော့ပဲ ရက်ရက် ရောရောပင် မျှဝေပေးလိုက်ပါသေးသည် ၊ ဤသို့ဖြစ်လာလျှင် သက်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီး ၏ အရှက်နှင့် သိက္ခာအတွက်တော့ တွေးဝံ့စရာ မရှိတော့၊ အယုံ အကြည်လွန်ကဲသော အမျိုးသမီးများ တစ်ခုသတိ ထားဖို့က မိမိနှင့်ဆက်ဆံ သော မိမိ၏ချစ်သူရည်းစား(သို့မဟုတ်) လင်ယောက်ျား သည် မိမိနှင့် အစဉ်ထာဝရ အဆင်ပြေနေမည်မဟုတ် ၊ တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်၌ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အဆင် မပြေမှုများ သဘောထားကွဲလွဲမှုများ မလွဲမသွေ ကြုံလာရဦးမည်သာ ဖြစ်သည် ၊
ထိုအခါ ယောက်ျား လုပ်သူက စိတ်သဘောထားညံ့ဖျင်းမည် ၊ လိင်ဆက်ဆံမှုကို ရိုက်ကူးထားသော ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း စသည်များ လည်း ကျန်ရှိမည်ဆိုလျှင် မိမိ၏အရှက်နှင့် သိက္ခာကတော့ မလွဲမသွေထိပါးခံရပေလိမ့်မည်၊ ထိုကဲ့သို့ မဖြစ်ရအောင် ခပ်ရိုင်းရိုင်းအကြံ ပြုရလျှင် အိပ်ခန်းထဲကကိစ္စသည် အိပ်ခန်းထဲမှာပင် ပြီးပြတ်တာအကောင်း ဆုံး ဖြစ်သည် ၊
ထို့ပြင် ဘယ်သူနှင့်ပဲဆက်ဆံဆက်ဆံ သန်လျင်GTCကျောင်း ၏အဖြစ်အပျက် ကဲ့သို့ မသမာသူများက တိတ်တဆိတ်ရိုက်ကူးခံရခြင်းမှ ကင်းဝေးအောင် လုံခြုံမှုကို အထူး ဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်သည် ၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အရွယ်ရောက်ပြီးသော ပုထုဇဉ်လူသားတိုင်း ယခုလို လိင်ကိစ္စများ ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ခံစားနေကြသည်ကား မှန်၏ ၊ သို့ရာတွင် ကမ္ဘာဦးကတည်းက ဖြစ်တည်လာသောလူ့စည်းမျဉ်းဥပဒေက ကွယ်ကွယ်ဝှက်ဝှက်သာ ခံစားခွင့်ပြုသည် ၊ တရားဝင်လင်မ ယားပင် ဖြစ်နေပါစေ ၊ မြန်မာစကားပုံဆိုရိုး အတိုင်း “ သိသာသိစေ ၊ မမြင်စေရ “အောင် ကျင့်သုံးရသည် ၊ မဟုတ်လျှင် အထက်ဖော်ပြပါ Melody World မှ တက်လာသောအဆိုတော်မလေးကဲ့သို့ မိမိတို့၏ အနာဂတ်ဘ၀သည် အလွဲမသွေ ပျောက်ဆုံးပါ လိမ့် မည်၊
ကြုံ၍ တစ်ခု ၀န်ခံလိုက်ရပါဦးမည် ၊ မိမိ ဤဆောင်းပါး လေး ကိုရေးရန် လေ့လာသောအားဖြင့် လိင်ကိစ္စတို့ဖြင့်နာမည်ထွက်သော bloggerဆိုဒ် များသို့ ၀င်ကြည့်ရာ တွေ့ရသည်က အံ့သြစရာကောင်း သလို ရယ်စရာလည်းကောင်းသည်၊ ရယ်လည်း ရယ်လိုက်မိပါသည် ၊ ကြည့်လေ ၊ vzoချက်ဆိုသော ဗွီဒီယိုဖိုင်တို့တွင် တစ်ချို့ကောင်မလေးများက သူတို့၏အမြင်မတော်ရာကို ဖော်ချွတ်ပြကြသည့်အဖြစ်၊ ဒီကောင် မလေးတွေ ဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့များ ဒီလိုလုပ်ရပါလိမ့်ဟု မိမိစဉ်းစားမရ ၊ ဖော်ချွတ်ပြတတ်သော သဘောသည် မိန်းမတို့၏ ၀ါသနာတစ်ခုပေလား ၊ ဆောရီး ၊ (ဤစကားရပ်တွင် တကယ့်ကို ဣနြေ္ဒသိက္ခာ ကြီးမားသော အမျိုးသမီးများမပါဝင်ပါ၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသက်ထက် အရှက်ကို ပိုတန်ဘိုးထားသော အမျိုးသမီးများစွာ ရှိပါသည် ၊ ဤစကားရပ်သည် vzoချက်ဆိုသော ဗွီဒီယိုဖိုင်များကို လေ့လာကြည့်ပြီး နောက် အမှတ်မထင်သုံးသပ်မိသော အတွေးမျှသာ ဖြစ်ပါသည်၊ )
vzoချက်ရာတွင် ၀ါသနာကြောင့်ပဲဆိုဆို တစ်ခြားဘာအကြောင့်ကြောင့် ပဲဖြစ်ဖြစ် ဖော်ချွတ် ပြခြင်းသည်ကား ပြဿနာမဟုတ် ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးသာ ဖြစ်သည် ၊ ပြဿနာက မိမိပြလိုက်သော တစ်ဖက်ယောက်ျားလေးက ထိုပုံရိပ်ကို ဖမ်းယူ ထားပြီး အင်တာနက်ပေါ် လွှင့်တင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည် ၊ယခုကဲ့သို့ဖြစ်လာလျှင် မိမိ၏အနာဂတ်ဘ၀ကို မထိခိုက်စေဦးတော၊့ မိမိကိုသိသော ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ အရှက်ရဖို့ရာ များသည် ၊ ထို့ကြောင့် ခပ်လွယ် လွယ်ဖော်ချွတ်ပြတတ်သော ၊ ဖော်ချွတ်ပြချင်သော ကောင်မလေးများ အနေဖြင့် ဘာမဟုတ်သည့် ကိစ္စ လေး တစ်ခုနှင့် မိမိတို့၏ရည်မှန်းချက်များ ၊ အနာဂတ်ဘ၀များ အဖုအထစ်မဖြစ်စေရန် လေးလေးနက်နက် တွေးတောဆင်ခြင်သင့်ပါသည် ၊
ထို့ပြင် မိမိ၏၀ါသနာဆန္ဒအရ အမှတ်မထင်ပြုမူလိုက်မိသော ကိစ္စရပ်လေး တစ်ခုက မိမိ၏ မိဘဆွေမျိုး မိတ်ဆွေ ညီအကိုမောင်နှမအားလုံးကိုပါ ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း သတိပြုသင့်ပါ သည်၊ ဤဆောင်းပါးတွင် မြန်မာ့ လိင်မှုကိစ္စများကို ပညာပေးသဘောမဟုတ်ပဲ မသမာစိတ်ဖြင့် နည်းမျိုး စုံဖြင့် ရယူပြီး အင်တာနက်ပေါ်လွှင့်တင်နေကြသူတို့အား တစ်စုံတစ်ခုပြော ချင်မိ သော်လည်း မိမိ၏ ပြော စကားသည် လုံးဝအရာထင်မည်မဟုတ်ပေ၊ ထိုသူတို့အတွက် ကုရာနတ္ထိ ဆေးမရှိပေ ၊ နှမချင်း ကိုယ်ချင်း စာနာတတ်သောစိတ်ကလေး နည်းနည်းလောက် ထားပေးနိုင်ကြ လျှင်တော့ အထူးဝမ်းမြောက်ဖွယ် ရာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်၊ အထက်ပါစကားရပ် တို့ကို ခြုံငုံပြီး မိမိထပ်ပြောပါဦးမည် ၊ မှုဒိန်းမှုကဲ့သို့သော မတရား အနိုင်ကျင့်စော်ကားခြင်း၊ သူတစ်ပါးမယားကို ကြာခိုခြင်း ၊သူတစ်ပါး လင်ယောက်ျားနှင့် နောက်မီးလင်းခြင်း ကိစ္စမျိုးမဟုတ်လျှင် အရွယ်ရောက်ပြီးသော ယောက်ျားမိန်းမတို့၏ နှစ်ဦးသဘောတူချစ်ရည်လူးသည့် ကိစ္စသည် အပြစ်မဟုတ် ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မဆိုင် ၊ ဒီကိစ္စသည် ဘ၀တစ်ခုအတွက် အရေးပါသော စည်းစိမ်ဖြစ်သည် ၊
ခံစားလိုက ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည် ၊ ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်အနည်းငယ်မှတစ်ပါး အနန္တစကြာ ၀ဠာတစ်ခုလုံး ဒီစည်းစိမ်ကို ခံလည်း ခံစားနေကြသည် ၊သို့ရာတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် လက်ခံ ထားသော လူ့စည်းမျဉ်းဥပဒေအရ သိုသိုဝှက်ဝှက် ခံစားဖို့လိုတော့ပါသည်၊ ဒီကိစ္စရပ်ကြောင့် မိမိတို့၏ အနာဂတ်ဘ၀ တိမ်းစောင်းသွားသည်အထိ မဖြစ်စေရပေ၊ ကိုယ့်ဘာသာရိုက်ကူး၍ အင်တာနက်ပေါ်လွှင့် တင်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ပဲ မသမာသူများက ရိုက်ကူးလွှင့်တင်လိုက် သောကြောင့် ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာသော ချစ်ရည်လူးသည့်ကိစ္စရပ်များကိုလည်း ယဉ်ကျေးမှုအမြင်ဖြင့် အပြစ်ရှုထောင့်ကမကြည့်ပဲ ကိုယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်၍ စာနာနားလည်
ပေးနိုင်ကြစေရေးသည် ဤဆောင်းပါး၏ ပဓာနရည်ရွယ်ရာ ဖြစ်ပါသည် ၊ မြေနိမ့်ရာ လှံမစိုက်ကြဖို့ အထူး ပန်ကြားချင်ပါသည် ၊ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် ……..။
Credit: Myanmar Express
သင့်ရဲ့ အီးမေးလ် လိပ်စာ ရိုက်ထည့်ပါ
ရွှေသတင်းသစ် အွန်လိုင်းမီဒီယာ မှ သင့်အီးမေးလ်သို့သတင်း နှင့် ကဏ္ဍအားလုံး ပိုစ့်အသစ် တင် တိုင်း ၊ အရောက် ပို့ဆောင်ပေးသွားပါမည်။
0 comments to “ယောက်ျား မိန်းမ ထိုကိစ္စ”
ရွှေသတင်းသစ် အွန်လိုင်း သတင်းစာမျက်နှာသို့ မိမိ ၏အတွေးအမြင် ၊ အကြုံပြုစာ ၊ ဆောင်းပါးများ ပေးပို့လိုပါက shinkawei@yahoo.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
၂၀၁၅ မှာ သမ္မတ ကိုဘယ်သူဖြစ်စေချင်လဲ ?
သင် သိပါသလား ?
ကိုယ်ဝန် တားဆီးခြင်း နည်းလမ်းများ
“ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားမှု မပြည့်စုံ ပါဘဲလျက် ပရမ်းပတာ လက်လွတ် စပယ် ဖိတ်ခေါ်မှုသည် ဧည့်သည်များ အတွက် အညှာ အတာမဲ့စွာ ရက်စက်မှု တစ်ခုပင်တည်း။” ပဋ...
ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ၁၀ ပေါင် အဆီကျ နည်း
ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ၁၀ ပေါင် အဆီကျ ဟင်းရည် ချက်နည်းကို အရင်ကတစ်ခါတင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်... အခု ခဏခဏမေးလာတာနဲ့ လိုအပ်တာလေးတွေပြင်ဆင်ပြီးတင်ပေး...
ဗီဇာသက်တမ်းလွန် မြန်မာများ အလုပ် ဆက်လုပ်ခွင့် ထိုင်းအစိုးရနှင့် ဆွေးနွေး
ဗီဇာ လေးနှစ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံး၍ ပြည်တော်ပြန်ရမည့် အခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာလုပ်သားများ အလုပ် ဆက်လက် ...
အမျိုးသမီးများ ဆန္ဒဖြေဖျောက်ခြင်း၏ အကျိုး
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ ဆရာရှင့် ကျမ အခု ရောဂါတခု ခံစားနေရလို့ စိတ်ပူလို့ ဆရာ့ကို မေးတာပါ၊ ရင်ဖွင့်တာပါရှင့်။ ကျ...
From : .... ဧရာဝတီ ဇွန်သဉ္ဖာက မှော်ဘီ GTC ကနေ B.E ရော M.E ပါဘွဲ့များပါ ရယူခဲ့ပြီးမှ မော်ဒယ်လ် လောကကို ၀င်ရောက်လာသူလည်း ...
လွယ်သလား ခက်သလား ရာမ
လူတိုင်းမေးချင်သိချင်ကြတဲ့ မေးခွန်းလေးပါလွယ်သလားခက်သလားရာမတဲ့ရန်ကုန်လို မြို့ကြီးတွေမှာတောင် တစ်ပြားကို ငါးထောင်ကနေ တစ်သောင်းထိပေးနိုင်ရ...
စင်္ကာပူ ဇာတ်လမ်းများ (၁)
သူက ကျနော်ရဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းနေဖက်ပါ… ကျနော်တို့ ချစ်သူဘ၀ ၃ နှစ်ရှိခဲ့ပြီး အခု အိမ်ထောင်သက်တမ်းကလဲ ၃နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ… ပြသနာ တစ်ခုပ...
“ဗမာမိန်းကလေးကို မုဒိမ်းကျင့်ပြီး ရောင်းစားဖို့ ကြံခဲ့ကြ”
21.9.2013 ရက်စွဲဖြင့် တင်ခဲ့သော “မိတ္ထီလာမှာ ကုလား (၆) ယောက်နှင့်အတူ ဖမ်းမိသော ဗမာမိန်းကလေး ဆေးမိသလိုဖြစ်နေ” သတင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ရပ်...
ပြိုင်တူပြီးတာဟာ ချစ်တင်းနှောခြင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးအရသာလား(+18)
“ဇာတ်သိမ်းခန်း ရာဇ၀င်” တင်လိုက်တဲ့အခါမှာ “ရွှေစွန်”ဆိုတဲ့ နာမည်ဝှက်နဲ့ တစ်ယောက်က အင်္ဂလိပ်လို လှမ်းမေးလာပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ အခက်အခဲ ရှိသူ...
သံတွဲမြို့ ကုလား-ရခိုင် အဓိကရုဏ်း ဓားခုတ်ခံရသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ - ၅ ပုံ)
အခုသံတွဲ ဖြစ်စဉ်မှာ ဒါဏ်ရှာ ရလာရေ မျိုးချစ်ရခိုင်ယေ မျက်နာနတ် မျက်လုံးကိုအသေအချာ ကြည့်ကတ်ပါ ဇာလောက်ထီ ခံစားနိန်ရပြီးကေ ဇာလောက...
▼ August (690)
ရုရှားသမ္မတ အမေရိကန်ကို စိန်ခေါ်
82 ဥပဒေဆိုတာ ဘာလဲ.......
ပထမဆုံး ပြည်တွင်းဖြစ် ရဟတ်ယာဉ်တင် တိုက်ခိုက်ရေး သေ...
မန္တလေးမြို့၊ ကျုံးဘေးတစ်ကိုယ်တော်ဓါးခုတ်သမား ရပ်ကွ...
ဘင်္ဂါလီ ကျောင်းသားများ တက်ရောက်သင်ကြားနေသည့် အခြေခံ...
ဘွဲ့နှင်းသဘင် ဦးထုပ် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
ရန်ကုန်မြို့တွင် Day Club များ လုံးဝမဖွင့်ရန် ညွှန်...
အလယ်တန်းပြဆရာမ ဒေါ်စိုးစိုးခိုင်အား ပညာရေး ၀န်ကြီးဌ...
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ တာဝန်မှပြန်လည် ရုပ်သိမ်း...
ဆီးရီးယားသည် အမေရိကန်ကို အောင်ပွဲခံလိမ့်မည်ဟု အာဆတ...
တံတားကေဘယ်ဝါယာကြိုးများ ဖြတ်တောက်ခိုးယူသူများအား ဖ...
အိန္ဒိယမှ တရားမဝင် လာရောက်နေထိုင်သူများထံမှ လက်နက်မ...
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလာတို့ လေကြောင်းပျံသန်းရေး သဘောတူညီ...
လားရှိုးတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကို သတ်ဖြတ်လုပ်ကြံရန်ကြံစ...
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် ကျောင်းကြိုသွားသည့် အမျိုး...
ရုရှားနိုင်ငံက MIG-29K KUB အမျိုးအစား တိုက်လေယာဉ် ...
ဆီးရီးယားအား စစ်ရေးအရအရေး ယူရန်အဆိုကို ဗြိတိန်လွှတ်...
ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသအချို့ ရေကြီး၊ မြေပြိုမှုများဖြစ်ပွာ...
တန်ဘိုးငွေကျပ်(၇၀၂)သိန်းဖိုးရှိ ဘိန်းစိမ်းများ ဖမ်...
တောင်ဥက္ကလာ ဓားနဲ့ ပါးကို ခြစ်တဲ့ အမှုပေါ်ပြီ
ရာထူး အထုတ်ပယ် ခံရတဲ့ ဒေါ်စိုးစိုး ခိုင် ကိစ္စ ပညာေ...
အမေရိကန် MGM မီဒီယာ ရဲ့  နောက်ကွယ်က ဇာတ်လမ်း
မိတ္ထီလာတွင် ဦးသောဘိတ ခေါင်းအထုခံရ သေဆုံးခဲ့ခြင်းအ...
NLD မှာမွတ်စလင်တွေ ရှိတယ်လို့ ပြောပြီး ထောက်ပြတာဟာ...
NLD ပါတီ အနေဖြင့် ဘင်္ဂလီများဘက်မှ အပြည့်အ၀ ရပ်တည်တေ...
"ကမ္ဘာ့ဘဏ် ချေးငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၂၆၀ ကျော် လွှတ်တော် အတ...
ဆီးဂိမ်းတွင် ကျင်းပမည့် အားကစားနည်း ၃၃ မျိုးအတွက် ...
ကျွန်တော်နှင့် ဆီးရီးယား (ရေးသားသူ- ဘိုအောင်ဒင်)
" ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုလျှော့ချရေး ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ် ...
၃၅ နှစ်ခန့် ပျောက်ကွယ်နေသော သရုပ်ပြတရားစီရင်မှု ဒဂု...
မိန်းကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ လိင်အင်္ဂါကို ခွဲစိတ်ပေးခြင်း
မြန်မာလအမည်တွေ နောက်ကွယ်မှ အကြောင်းအရာများ
ဆီးရီးယားကို အမေရိကန် တိုက်ခိုက်ပါက အစ္စရေးကို လက်တ...
ဦးလှဆွေ သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
၀ယ်သူသာလျှင် အမြဲမှားသည့် ဟန်းဆက်ဆိုင်တို့ ပေါ်လစီ
မောင်တောပဋိပက္ခတွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ ဘင်္ဂါလီ ၇၀ေ...
နော်အုံးလှ ကို ထောင်ဒဏ် ၂နှစ် ချမှတ်လိုက်ပြီ
ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါ အများထက်အသိပညာ ကြွယ်ချင်သလား ဘား...
* ဦးလှဆွေ သို့ အရှင်ဂန္ဓသာရ မှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ *
စာရေးဆရာ ကိုအောင်ဆန်း အပိုင်း (၁၁)
စစ်ကိုင်းတိုင်း တရားသူကြီးချုပ်ကို စစ်ဆေးအရေးယူရန်...
ဗိုလ်မှူး Nidal Hasan ကို သေဒဏ်ချမှတ်
ကင်တားနားအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြီ
Miss Universe ပြိုင်ပွဲ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်အတွင်း ...
ဟောဒီက ဖား ဗျိုးးးး
ပုဒ်မ ၁၈ ဖျက်သိမ်းပေးရန် ဆန္ဒပြသူများကို ပုဒ်မ ၁၈ြ...
လွှတ်တော်နှင့် သမ္မတရုံး ပြေလည်မှုမရှိဟု ပြည်သူလူထု အ...
ငွေကျပ် သိန်းလေးထောင် လေးရာကျော် တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြ...
စာရေးဆရာ ကိုအောင်ဆန်း အပိုင်း (၁ဝ)
ဒီမိုကရေစီကို ဖင်ခုထိုင်ပြီး သရုပ်ပျက်ဝတ်စားလာသော ...
ကန့်ဘလူ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သတ် တဲ့ The Voice အယ်ဒီတာ ချုပ...
သိုဝှက်သယ်လာသောဆူဒိုအက်ဖီဒရင်းဆေး ဆီဘောက်ဆာကားမှ ဖ...
သဘောထား အမှန်ပဲလား NLD
"လွှဲ" သံသရာထဲမှာဝဲကာလည်နေမှာလား ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နောက်လအတွင်း စင်္ကာပူ နှင့် ချက်န...
အရိုက်ခံချင်လွန်းသော ကိုကိုချစ်၊ မမချစ်များ
လက်ဖက်ခြောက်ဗူးပေါ်တွင် ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံ ကုန်အမှ...
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်များ လုံခြုံရေး Microsoft...
ဆီးရီးယား နိုင်ငံ ကို ၇၂ နာရီ အတွင်း လေကြောင်း ၊ေ...
အစိုးရ နှင့် ပြည်သူ
Eleven Media ၏ ဖော်ပြမှု မြစ်မခ အထိနာ
တစ်ထောင့်တစ်ည ပုံပြင် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
စာရေးဆရာ ကိုအောင်ဆန်း အပိုင်း (၉)
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် လုံခြုံရေး အရေးပေါ် တိုးမြှင့်
ဈာပနမှာ အလံတထောင်ထောင် သူတို့ ဘာတွေကြံဆောင်
ဟိုင်းကြီးကျွန်းအနီးတ၀ိုက်တွင် ဘင်္ဂါလီ ၃၂၇ ဦး ဖမ်းမ...
နိုင်ငံသားမဟုတ်သူများအား နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်ခွ...
အကြမ်းဖက် သမားများက နိုင်ငံခြား ခရီးသွားများအား ဦး...
ကုလရုံး အမေရိကန်အစိုးရ ထောက်လှမ်းတာကို ကုလဝေဖန်
မြန်မာပြည်ရောက် ကုလအကြံပေး Nambiar ကချင်ပြည်နယ်သွာ...
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ် ရေးဆွဲဖို့ UNFC နဲ့ UNAေ...
အသက် ၂၃ နှစ် အရွယ် ဓာတ်ပုံ ဆရာမ ကို မွမ်းဘိုင်း မှ...
“နင်စေရင်”ရုပ်ရှင်ကားကြီးအတွက် ရင်ခုန်နေတဲ့ ၀တ်မှုန...
ယီမင် လေတပ် ဗိုလ်လောင်း ကြိုပို့ယာဉ်ကို အယ်လ်ကေဒါ ...
ဆီရီးယား ပြည်တွင်းစစ် ဓာတုဗေဒ စစ်လက်နက်တွေ ပါကုန်ြ...
စင်္ကာပူရောက် မြန်မာမလေး တစ်ယောက် FACEBOOK မှာ မဖွယ်မရာပုံတွေ တင်၍ အိမ်ပြန်ပို့ခံရ
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် အိမ်ဖော်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူ အသက် (၂၂) နှစ်အရွယ် မြန်မာ မိန်းကလေး တစ်ဦး သည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် မဖွယ်မ...
ဒီpost ‌လေးကိုတင်‌ရတာက‌တော့မြင်‌ရသမျှအဆင်‌မ‌ပြေ‌နေလို့ပါ။ခု‌ပြောချင်‌တာက‌တော့မမိုးစက်‌ဝိုင်‌အ‌ကြောင်းေ လး‌ပေါ့။MissUniverseဝင်‌ပြိ...
ကေအိုင်အေဌာနချုပ် လိုင်ဇာအား (၄၈) နာရီအတွင်း ထိုးစစ်ဆင်တော့မည်
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကာလတွင် ပူတာအို ခရိုင်ထဲမှာ KIA က ဆက်ကြေးကောက်တာကို သတင်းရလို့ မချမ်းဘောက ခလရ ၁၃၇ လိုက်သွားတဲ့ တပ်မှ အင်အ...
သြဂုတ်လမှာ ကျုပ်အသုဘ အတော်များများ ပို့လိုက်ရတယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့လည်း သိမှာပါပဲ။ ကျုပ်တို့ရဲ့ စာပေနယ်၊ သတင်းစာနယ်ပယ်ထဲက အထင်ကရဆရာအချို့ကွ...
ဖူးငုံသစ်စ ပျိုမေတို့ သိသင့်သော ရာသီအကြို ဝေဒနာအကြောင်း
ကလေးဘဝမှာ ခုန်ပေါက်ဆော့ ကစားရာက ကြီးပြင်းလာတဲ့ သမီးမိန်းကလေးတွေဟာ တစ်ကြိမ် တစ်ခါမှ ရာသီမလာ ဖူးသေးတဲ့ အတွက် ရာသီအကြို ဝေဒနာ အကြောင်းကို...
ထွန်းအိန္ဒြာဗို ကားရိုက် ဘာကြောင့် နားရတယ်
အကယ်ဒမီ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုကို ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ဖြစ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ဝင်တဦးအဖြစ် ဤသို့ တွေ့ရသည် (ဓာတ်ပုံ – ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်အဖွဲ...
. | © 2013 by ရွှေသတင်းသစ် and - | Powered by Shwe New News